‘इन–रुट’ मौसमका कारण हेलिकप्टर दुर्घटना «
‘इन–रुट’ मौसमका कारण हेलिकप्टर दुर्घटना
पाइलटसहित ६ को मृत्यु
नुवाकोट-गोरखाको समागाउँबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुँदा पाइलटसहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी एक घाइते गोर्खाको चुमनुवी गाउँपालिका वडा नं. २ का आनी डोल्पा डिकीको काठमाडौं स्थित मेडिसीटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । समागाउँबाट उडान सुरु गर्दा मौसम सफा भएपनि ‘इन–रुट’ मौसम बिग्रिएपछि दुर्घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
के कारण हो भन्ने जाँचबुझ आयोगले छानबिन गर्ने भएपनि मौसमकै कारण हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रवन्धक राजकुमार क्षेत्रीले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त कुँवरका अनुसार दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा पाइलट निश्चल केसी, रामेछापका ४० वर्षीय डिल्लीबहादुर गुरुङ, दोलखाका ३७ वर्षीय हिरा शेर्पा, सिन्धुपाल्चोकका २२ वर्षीय सुनिल तामाङ, गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. १ का छोवाङ नुर्बु र जापानी नागरिक हिरोमी कोमात्सु रहेका छन् ।
गोरखाबाट काठमाडौं आइरहेको कल साइन ९ एन–ए–एल–एस को अल्टिच्युड एअरको हेलिकोप्टर नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित बर्सुन्चेतको जंगल स्थित रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको अवस्थामा शनिबार अपरान्ह ३ बजे फेला परेको उद्धारको लागि गएको प्रहरी चौकी किम्ताङको टोलीले भेट्टाएको थियो ।
गोरखाको सामागाउँबाट बिहान ७ बजेर ५० मिनेटमा काठमाडौंतर्फ उडेको हेलिकोप्टर बिहान ८ बजेर पाँच मिनेटमा दुर्घटनामा परेको थियो । भौगोलिक विकटता, ठूलो वर्षासहितको बाक्लो हुस्सु र बाक्लो जंगल क्षेत्रमा भएको दुर्घटनाको स्थान पहिचान र उद्धारको लागि कठिनाई भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बेगनासतालमा डुंगा डुब्दा दुईको मृत्यु, ६ बेपत्ता
लेखनाथ- पोखराको बेगनासतालमा डुंगा डुब्दा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना बेपत्ता भएका छन् । शनिबार दिउँसो आफन्तकोमा दर खान निस्केका ११ जनाको समूह चढेको डुंगा बेगनास तालको लिब्दी भन्ने ठाउँमा डुबेको हो ।
२ जनाको मुत्यु भएको छ भने एकै परिवारका ३ सहित ६ जना वेपत्ता भएका छन् । दुर्घटनामा परेका ३ जनाको भने उद्धार गरिएको छ । दुर्घटनामा परी पोखरा महानगरपालिका वडा नं २८ कालिकास्थान घर भएकी ५१ वर्षिय कृष्ण कुमारी बजगार्इं र पोखरा ३१ बेगनास घर भएकी वर्ष ३२ की जमुना कँडेल गैरेको मुत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूको बेगनासतालबाट उद्धारपछि बजगाईको लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पतालमा र कँडेलको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
वेपत्ता हुनेमा गैडाकोट घर भएका ३२ वर्षीय रवि खनाल, उनका छोराहरू ८ वर्षीय शंखर खनाल र ६ वर्षिय शिव खनाल रहेका छन । त्यसै गरी वेपत्ता हुनेमा पोखराकी १८ वर्षिय मनिसा बजगाईका पाँच वर्षिय छोरा प्राचिन पौडेल, तनहँुको भिमाद नगरपालिकाका ४ वर्षिय रन्जित गैरे र मनिसा बजगाई पनि छन् ।
रवि खनाल नेपाली सेनाका बाहलवाला कर्मचारी हुन् । उनले डुंगा चलाएको स्थानियले बताए । रविकी श्रीमती सपना खनालको सकुसल उद्धार गरिएको छ । डुंगामा एक्लै गएका कमल कँडेल तालमा डुंगा पल्टिएको देखेपछि बेहोस भएका थिए । उनी पनि तालमा खसेपछि उद्धार टोलीले उद्धार गरेको थियो ।
डुंगा गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा करिव डेढ सय मिटर वर दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनास्थल बेगनास डुंगाघाटदेखि करिब २ किलोमिटर टाढा रहेको छ । तीज मान्नका लागि वेगनासताल पारि घर भएका आफन्त कमल कँडेलको घरमा आएको बताइएको छ ।
डुंगामा सवार प्राचीन पौडेल एक्कासि तालमा खसेपछि आमा निशा पौडेल उद्धारको लागि तालमा हाम फाल्दा डुंगा अनियन्त्रित हुँदा डुंगामा पानी पसेर डुंगा डुब्न पुगेको स्थानियले बताएका छन् । लाईफ ज्याकेटबिना एकै डुंगामा १० जना सवार भई डुंगाबाट दुई जना खस्न पुगेसँगै अन्य डुंगामा सवार तालमा डुब्न पुगेका हुन् । डुंगा डुबेलगत्तै स्थानीय उद्धारमा जुटेकाले केहीलाई बचाउन सकिएको स्थानिय बेगनास युवा क्लवका अध्यक्ष रामबहादुर रानाभाटले बताए ।
घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी, स्थानियसँगै गोताखोरसहितको रेस्क्यू टिम परिचालन गर्दा शनिबार बेलुकासम्म वेपत्ताहरूको बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बताए । बेगनास ताल डुंगा व्यवसायि समितिका पूर्व अध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले बेगनास तालमा अनिवार्य लाईफ ज्याकेट गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन स्थानीयलाई लागु गर्न कठिन भएको बताए ।